The ROI nke Social Media | Martech Zone
Wenezde, August 1, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Anyị enweela infographics ugbua na otu esi eme ya eme ihe elekọta mmadụ media bụ… na otú enweghị atụ it is… but tupu ugha ma chigharia, aga m acho igosi gi otu a. N’abalị ụnyaahụ, mụ na Marty Thompson ka na-ekwu maka nke a. Ọtụtụ ụlọ ọrụ agaghị aga n'ihu site na iji usoro mgbasa ozi mmekọrịta ike n'ihi enweghị atụ. Otherlọ ọrụ ndị ọzọ na-amaba n'ime ya na-amataghị mmetụta ọ nwere ike ịbụ.
a ozi site na MDGA Mgbasa ozi na-eme ọmarịcha ọrụ nke inye ihe akaebe nke ma uru bara uru na nke a na-adịghị ahụ anya nke mgbasa ozi mmekọrịta, yana uru dị ogologo na mkpụmkpụ. Nke bụ́ eziokwu bụ na azịza ya dị n’etiti. Gaghị enwe ike ịtụle nlọghachi niile ozugbo, mana nlọghachi ogologo oge ga-aga n'ihu na-abawanye.